Global Voices teny Malagasy » India: Fanakambanana, Fahazoana Orinasa Ary Teknolojia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Desambra 2017 17:38 GMT 1	 · Mpanoratra Kamla Bhatt Nandika Vero
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
(Fanamarihana.lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2007)
Fanakambanana sy fahazoana orinasa ary teknolojia no nisongadina tao amin'ny lohahevitry ny resadresaka tao India. Tao anelanelan'ny herinandro vitsy monja, tafiditra tao anatinà fifanarahana ara-bola mitentina lavitrisa maromaro ny orinasa indianina , izay toedraharaha efa mahazatra azy ireo. Nandritra ny taona maro ny orinasa indianina no voabahana noho ny lalàm-panjakana henjana izay nisakana azy ireo tsy hifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Nisongadina tao amin'ny vaovao tamin'ity herinandro ity ny nahazoan'ny orinasa Britanika Vodafone tamin'ny vidiny 19 lavitrisa dolara ny orinasa Hutch Essar izay fahefatra lehibe indrindra amin'ny mpamatsy finday ao India. Nanoratra i Om Malik avy ao Gigaom  :
Ara-tantara, ny Vodafone no iray anisan'ny ratsy indrindra amin'ireo mpandraharaha amin'ny resaka fifandraisandavitra raha fanakambanana sy fakàna orinasa no resahana – fifanarahana ratsy, fivoahana tsy misy antony ary fandoavana vola mihoatra dia samy ampahany amin'ny lova navelan'ilay orinasa. Amin'ny fametrahana tombany manakaiky ny 19 lavitrisa hoan'ny Hutch Essar, orinasa fahatelo lehibe indrindra mpanome tolotra finday ao India, miaraka amin'ireo 24 tapitrisa nisoratra anarana, nataon'ilay goavana Britanika ny hiantohana ny tsy fiovàn'io lova io.
Ny vaovao goavana indrindra talohan'ny fakàna ny orinasa Hutch Essar ny nakàn'ny orinasa Anglisy-Nerlandey mpandrendrika vy “Corus” ny Tata tamin'ny vidiny 12 lavitrisa dolara. Sambany teo amin'ny tantaran'ny vondron'orinasa tao India no nisy faovana fanarahana tahàka izany. Tsy nahagaga raha feno ny hafaliana. Kanefa nisy teny kely mampitandrina nosoratan'i Dhiraj Nayyar  :
Afaka ve India hilaza ny tenany ho mahery be, mpanjaka vaovao, satria fotsiny hoe maka ireo orinasa any ivelany ny sasany amin'ny vondron'orinasany. Orinasa mety tsy mivadika hasambarana hoan'ny ankamaroan'ny olona izay mbola reraky ny fahantrana, ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra, ny hanoanana: ireo fepetra maha-olombelona mampahonena amin'ny ankapobeny. Na ny fananana fitaovam-piadina nokleary kely aza tsy manova izay zavatra izay. Raha ny antsasaky ny mponina no tsy mahay mamaky teny, tsy mamahana ny ao an-tokantrano na mampiakanjo ny tenany, inona no afaka ho lazaina momban'ny fanjakana? Na ny fanjakana Amerikàna aza tahaky ny poakaty rehefa voafaritra fa iray amin'ny olona 6 ao Etazonia no tsy mahay mamaky teny sy manoratra, ny ankamaroany miaina ao anaty fahantrana, fahantrana izay matetika miankina amin'ny resaka foko, ary toerana izay tsy ametrahan'ireo rivodoza tahàka ny Katrina ny Fanjakana matanjaka hikaroka amim-pahasarotana ny vahaolana
Inty misy fijery hafa momba ny fifanarahana Tata-Corus nentin'i Govindaraj Ethiraj , Indianina mpanao gazety, izay tao amin'ny biraon'ny BBC tamin'ny fotoana nanambaràna ny fifanarahana Tata-Corus. Toy izao ny nosoratany momba ny fijerin'ny vaovao ao Angletera sy Alemaina an'i India:
Sendra tao Londona ny tenako ny andron'ny nampahafantarana ny daholobe ny tolotry ny Tata hoan'ny Corus. Ary sendra namangy namana mpanao gazety koa tao amin'ny biraon'ny BBC tao White City, foiben'ny BBC World. Ka na nipetraka tao amin'ilay efitra famoaham-baovao efa tena nomerika tanteraka amin'izao fotoana izao aza aho dia efa nanomboka nandefa hatrany hatrany momba izay fifanarahana mety hisy ireo “Tickers” (fàfana mampita ny soratra vakiana amin'ny fampitambaovao ). Tonga saina ireo talen'ny BBC fa io izao no lasa vaovao goavana tamin'io andro io. Tsy ho an'ny famoahana ho an'i Azia irery fa ho an'ny fampitambaovao manerantany ihany koa.
Satria ny tenako dia Indianina mpanao gazety , nihevitra ry zareo fa afaka hanome fijery hafa aho. Ka nanontaniana ahy tamin'ny voalohany raha tena nisy tokoa io fifanarahana io. Avy eo, nanontanian'izy ireo,inona izao no mety hahazo ny Corus? Eny, ny valinteniko ho an'ilay fanontaniana voalohany, fa tsy nahita valiny aho ho an'ilay fanontaniana faharoa. Ny tiako ambara, tsy mbola nisy nanontany izay mihitsy aho tany aloha. Tahak'izay foana no nahazo an'ireo orinasa indianina mahantra tsy manana ahiahy. Tsy noho ny fakàna azy ireo , satria efa nataonay azo antoka ny tsy hamelàna an'ireny saingy noho ny fifaninanana dia indrisy fa nomenay alàlana.
Araka izany dia misy ny India Inc, izay lasa miha-mampatahotra ny endrika ivelany raha azo tenenina. Tao Bavaria, Alemaina aho talohan'ny nandalovako tao Londona ary nisy alemàna namana, mpanao gazety, nilaza fa nisy ahiahy teo anivon'ireo sasantsasany mpiasa amin'ireo orinasa injenieria ao an-toerana, indrindra rehefa avy nanomboka nampiasà fanànana taty ireo orinasa indianina hafa (tahaka ny Bharat Forge, M&M).
Avy any aminà fanakambanana orinasa mitetina an-davitrisa marobe, mifindra mankany amin'ny teknolojia isika. Tonga eo an-toerana ny Yahoo! India ary nataony nisy tamin'ny fiteny fito samihafa ny votoatiny. Kanefa tsy dia nandaitra loatra tamin'ireo bilaogera sasany izay fihetsika nataon'i Yahoo izay. Nanoratra i Inje Peenu avy ao Ginger and Mango :
Yahoo India launched a beta version of their Malayalam  (an Indian Language) portal and what do they do to fill their pages? Lift content just straight from small web magazines and blogs without asking a word or adequately compensating for those. What a shame!
Nanomboka karazany faharoa an'ilay vavahadin-tseraserany Malayalam  (fiteny indianina) ny Yahoo India ary inona no ataon'izareo mba hamenoany ny pejiny? Maka ny votoatin'ireo gazetiboky kely ety amin'ny tranonkala sy bilaogy tsy ankiteny na manome onitra mifandanja ho azy ireny. Mahamenatra!
Tahàka ny nihazakazaka ny fanaovana bilaogy an-tsary tany ambanivohitr'i India. Manoratra momba ny tetikasa iray fanaovana bilaogy an-tsary tahaka izany ao India i Kuffir of Blogharti
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/06/111105/
 Om Malik avy ao Gigaom: http://gigaom.com/2007/02/11/vodafone%E2%80%99s-111-billion-passage-to-india/
 Dhiraj Nayyar: http://3quarksdaily.blogs.com/3quarksdaily/2007/02/empire_with_no_.html
 Govindaraj Ethiraj: http://datelinebombay.blogspot.com/2006/10/india-and-india-inc-tata-corus-fallout.html